Miaramila / polisy - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Fanarenana ny seho 3D tena izy taorian'ny horohorontany
(1) Famerenana amin'ny laoniny haingana ny toerana misy ny voina nefa tsy misy ny zoro maty
(2) Ahena ny hamafin'ny asa sy ny loza mety hitranga amin'ny naman'ny Fiangonana
(3) Manatsara ny fahombiazan'ny fanadihadiana vonjy taitra voajanahary
Pikantsary modely 3D an'ny horohorontany Hualien
Tamin'ny 23:50 tamin'ny 6 Febroary 2018, nisy horohoron-tany nahatratra 6.5 tamin'ny maridrefy niseho tao amin'ny faritry ny ranomasina akaikin'ny County Hualien, Taiwan (24 ° 13 ′ N —121 ° 71 ′ E). 11 km ny halalin'ny afovoany, ary taitra ny Taiwan iray manontolo.
Ny horohoron-tany dia nitranga tamin'ny 3 Aogositra 2014 tao Ludian, faritanin'i Yunnan. Ny fiasa sary haingana 3D an'ny sary manjavozavo UAV dia afaka mamerina amin'ny laoniny ny toerana misy ny voina amin'ny alàlan'ny sary 3D, ary afaka mandinika ny faritra iharan-doza tsy misy zoro maty afaka minitra vitsy.
3D modely mamerina ny tena sehatra
Mikoriana sy fotaka mihosin-tany
(1) Hizaha mivantana ireo trano sy lalana aorian'ny loza
(2) Fanombanana taorian'ny fihotsahan'ny tany
Tamin'ny Desambra 2015, ny Birao Fampahalalam-baovao Geographic an'ny Surveying and Mapping dia nanangana 3D ny tena seho voalohany mba hahafantarana ny toe-java-misy momba ny trano sy ny arabe, izay nilalao andraikitra lehibe taorian'ny famonjena.
Modely 3D an'ny fikorianan'ny Mud-rock any Shenzhen
Tamin'ny 12 Aogositra 2015, lozam-pifamoivoizana tampoka no niseho tao Shanyang County, Faritanin'i Shaanxi, izay nahafatesana am-polony maro. Ny fihotsahan'ny tany mihotsaka no mahatonga ny lalana tsy azo aleha. Ny sary miavaka UAV dia manana tombony miavaka amin'ity faritra ity. Noho ny maodely 3D, ny famonjena sy ny fihadiana fihotsahan'ny tany dia azo tanterahina amin'ny fomba mahomby.
Modely 3D an'ny Landslip any Shaanx
Ny maodely fipoahana zava-misy 3D any Tianjin
Tamin'ny 12 Aogositra 2015, nanaitra ny firenena iray manontolo ny fipoahana ny faritra Vaovao Tianjin Binhai. Ao amin'ny faritra fipoahana simika mampidi-doza, drôna no lasa "mpikaroka" mahomby indrindra. Ny drone dia tsy "pathfinder" tsotra, ary nahavita ny asany sary madiodio tamin'ny toerana nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana, ary namorona maodely 3D tena izy, izay nandray anjara lehibe tamin'ny baiko fanarenana sy famonjena.
Model maodely 3D tena izy
(1) Fanamboarana tonelina
(2) Ny fandrindrana ny tanàna
(3) Fandinihan-toerana ny hetsika lehibe
(4) Fanadihadiana momba ny fanaparitahana ny herin'ny fahavalo
(5) Simulasi miaramila virtoaly
(6) Fikarohana sy fampiharana ny toe-javatra ady 3D
(7) Fitsangantsanganana an-habakabaka, sns.